AKHRISO:-Hishiiska Hawada Soomaaliya ee maanta dhaqan galay xukuumaddii hore ee Ra’isulwasaare Saacid Shirdoon ayaa 2013 Saxiixday | Saadaal Media
AKHRISO:-Hishiiska Hawada Soomaaliya ee maanta dhaqan galay xukuumaddii hore ee Ra’isulwasaare Saacid Shirdoon ayaa 2013 Saxiixday
Dec 29, 2017 - 1 Jawaab
Dawladda Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah oo ay taariikhdu tahay 28.12.2017 waxaa ay dib ula soo wareegtay Hawada Soomaaliya, taasoo markii hore ay maamuleysay hey’adda International Civil Aviation Organization (ICAO).
Hishiiska maanta dhaqan galey ayaa waxaa horey u galey oo kasoo shaqeeyay Xukuumaddii uu Ra’isulwasaaraha ka ahaa Mudane Saacid Faarax Shirdoon ee uu Madaxweynahana ka ahaa Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo 30/9/2013 ay kala saxiixdeen Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi iyo Hey’adda ICAO.
Waxaa Dawladda Soomaaliya ay in muddo ahba daba joogtay sidii ay gacanteeda ugu soo celin lahayd maamulka hawadeeda oo ka saraysa 26,000 Ft, waxaana maalin walba dalka Soomaaliya dulmara 3000 illaa 3500 oo Dayuuradood, kuwaasoo laga qaadi jiray lacago aad u badan oo Ijaar ah oo lagu qiyaasay $665 Milyan sanadkii, Lacagtaasoo haba yaraatee aan dalka waxba kasoo gaari jirin.
Waxaa hishiiskaan masuuliyiintii kasoo shaqeeyay oo in lagu amaano mudan sidoo kale kamid ahaa:- Wasiirkii hore Gaadiidka iyo Hawada Mudane Siciid Jaamac Cali (Qoorsheel) iyo Danjarihii Dawladda Soomaaliya markaas u fadhiyay Nairobi Jamaal Maxamed Xasan oo haatan ah Wasiirka Qorshaynta ee Dawladda, kuwaasoo dadaal dheer usoo galay in Hawada Soomaaliya ay kusoo laabato gacanta Dawladda.
Si kastaba ha ahaatee hishiiska maanta dhaqan galay ee Hawada Soomaaliya ayaa lagu tilmaami karaa, guushii ugu wayneyd ee ay Soomaaliya gaartay tan iyo intii ka dambaysay burburkii dawladdii dhexe ee kacaanka ahayd, kaasoo ah mid taariikhi ah oo mudan in lagu amaano dhamaan musuuliyiintii horey uga soo shaqaysay.
HOOS KA AKHRISO HISHIISKII 2013 EE DAWLADDA SOOMAALIYA IYO IOCA
Xukumadihii hore ee tan ka horeeye way awoodeen in ay sooceliyaan hase ahaate ma ayanan dooneynin sababa arrimaha maamulka somaliland loogu beer laxawsanaaeye darteed. Mar hore ayaa mamulka hawada soomaaliya laasoo celin kare lakin daacad lagama aheyn oo lama rabin in ay Soo.aaliya mid noqoto